Ayutthaya, Thailand ~ Journey-Assist - mahaliana. Thailand
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Ayutthaya (Ayutthaya)
I Ayutthaya dia tanàna any Thailand, izay taloha no renivohitra amin'ity firenena ity. Avaratra ao Bangkok no misy ny halavam-potoana 75 km miala ny farany.
Tandremo: ny fanononana ny marina ny anarana dia manasongadina ny vaninteny farany!
Ayutthaya dia iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra ao Thailand ary mendrika ny fitsidihana. Tamin'ny taona 1991, ity tanàna ity dia tafiditra ao anatin'ny lisitry ny lova UNESCO manerantany. Maro ny mpizahatany no mampitaha ny tempolin'i Ayutthaya miaraka amin'ny tempolin'i Angkor amin'ny lafiny maritrano sy ny dikany ara-tantara, fa ny halehiben'ireo rafitry sy ireo fahagola ao Ayutthaya dia azo antoka fa tsy mahaliana tahaka an'i Angkor.
Tsy dia malaza amin'ny mpizahatany fotsiny i Ayutthaya raha oharina amin'ireo trano fandraisam-bahiny Thai sasany. Matetika no tsidihina izy io mba hifankahalala amin'ny mpahay tantara teo an-drenivohitra taloha. Na izany aza, ny fotodrafitrasa rehetra ho fitsaharana tsara eto amin'ity tanàna ity. Hizaha ny trano taloha rehetra ao Ayutthaya ao anatin'ny rafitry ny fitsidihana fohy dia tsy ho mandeha intsony, ka mijanona eto vetivety ny mpandeha. Ny fisafoana feno ny tanàna dia azo atao ao anatin'ny 3 andro. Misy trano fandraisam-bahiny maro samihafa amin'ny haavon'ny vidiny, atreho, tranom-bakoka, kafe, trano fisakafoanana.
Amin'ny ankapobeny, ny fotodrafitrasa fizahan-tany any Ayutthaya dia novolavolaina tsara, saingy tsy dia misy fahasamihafana. Raha tsy azo atao ny mizara 3 andro fotsiny ao Ayutthaya dia mitombina ny mijery ao amin'ity tanàna ity mandritra ny 1 andro amin'ny tenanao (na mampiasa fitateram-bahoaka aza dia afaka mankany Ayutthaya avy any Bangkok na Pattaya) na koa mpandray anjara amin'ny fizahan-tany.
Zavatra tokony hatao ao Ayutthaya
Saika tsy eo ny fialamboly. Ny mahaliana ihany dia tempoly taloha, izay misy samy miasa mandraka ankehitriny, ary ireo sisa tavela dia amin'ny endrika simba. Vitsy ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana, ny toeram-pivarotana lehibe koa dia tsy ao. Ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina ao Ayutthaya dia tsy azo atao ihany koa, satria lavitra ny ranomasina. Tany am-boalohany anefa io tanàna io, dia manana rivo-piainana manokana. Ayutthaya mazava tsara fa miainga amin'ny sisa amin'ireo tanàna mpizahatany Thailandey. Miaina ny fiainany na inona na inona mpizahatany, na izany aza, dia mandray ny vahiny rehetra izy.
Ny maha samy hafa azy amin'ity tanàna ity, ankoatra ny zavatra hafa, dia ny tsy fahita mahazatra amin'ny lalana ho an'i Thailand. Amin'ny ankapobeny, noho ny fandaharana nataony dia be dia be i Ayutthaya. Indraindray, noho izany antony izany, dia misy ny fahatsapan'ny olona iray ao anaty vohitra iray.
Loza ao Ayutthaya
Ny hariva, ankoatra ny fitsidihana ny barazy amin'ny alina na ny iray amin'ireo kafe kely dia tsy misy zavatra hafa manokana ao Ayutthaya. Amin'ny ankapobeny, amin'ny 19 ora hariva, ny mponina ao an-toerana dia nanjavona avy eny an-dalambe ao an-tanàna ary tamin'ny 21 ora teo dia tsy nisy nahita teo. Ny toerana tokana izay mihetsiketsika amin'ny alina ary amin'ny hariva amin'ny Ayutthaya dia ny bazaar amin'ny alina, izay ahafahanao mahazo mamy any amin'ny kafe mifanila amin'ny mponina ao an-tanàna.
Amin'ny andro, dia afaka mandeha ao amin'ny bara lehibe Ayutthaya Chao Phrom ianao. Natao manokana ho an'ny mponina any an-toerana izany, ka tsy maro ny souvenir, na izany aza, misy akanjo tena mora sy vokatra lafo vidy ary sakafo haingana.
Mampalahelo fa ao anatin'izany rivo-piainana mahafinaritra izany ny olona iray dia mety ho mailo hatrany. Izany dia mitondra amin'ny fangalarana zavatra eny an-dalambe (sy ny mpizahatany, mazava ho azy, "mahaliana" mpanao heloka bevava eo an-toerana voalohany). Ireo mpitaingin-tsoavaly amin'ny môtô indraindray manongotra telefaona eny an-tanany ary mandondona harona eny an-tsorony. Noho izany, na aiza na aiza ao Ayutthaya dia misy famantarana mampitandrina ny mpizahatany. Ny fepetra fiarovana faran'izay tsotra indrindra dia tsy tokony hohadinoina. Ary izany, amin'ny maha-fitsipika azy, dia ampy mba tsy hiharan'ny lasibatry ny mpitrandraka.
Ny antsasaky ny faritanin'i Ayutthaya no tena ao amin'ny nosy izay ahitana renirano 3: Chao Praya, Pa Sak ary Lopburi. 4,5 km ny nosy ary 2,5 km ny sakany. Miampita fantsona misy lavany 50 km izy io. Miaraka amin'ny perimeter dia voahodidin'ny U Thong Street izay manana endrika boribory. Ayutthaya, miaraka amina mari-pahaizana manokana, dia mizara ho ampahany vaovao sy tranainy.
Nahaliana an'i Ayutthaya
Amin'ny ampahany vaovao amin'ny tanàna (any avaratra-atsinanana), ny ankamaroan'ny foto-drafitrasa fizahan-tany dia mifantoka, anisan'izany ny trano fandraisam-bahiny rehetra Ayutthaya. Any amin'ny faritra taloha amin'ny tanàna, izay monina ao avaratra-andrefana, ny ankamaroan'ny zava-misy ara-tantara dia misy.
Ampy ireo hotely sy trano fandraisam-bahiny ao amin'ity tanàna ity. Ny trano fandraisam-bahiny sy hotely antonony dia manjaka. Ny trano fandraisam-bahiny dia saika tsy eto eto. Raha toa ka tsy natao ny hamaky mialoha ny hotely ary mila mitady trano amin'ny vidiny mirary, dia afaka mandeha any amin'ny faritr'i Soi 2 ianao, eo anelanelan'ny làlana Naresuan sy Pamaprao, akaikin'ny tsenan'i Chao Phrom.
Ny fitsangatsanganana andiany iray andro mankany Ayutthaya avy any Bangkok dia mitentina 1 baht eo ho eo ny olona tsirairay, ary avy any Pattaya - farafahakeliny 800 baht. Raha mividy fitsangantsanganana amin'ny orinasa Rosiana ianao, misy torolàlana miteny amin'ny teny Rosiana, ary tsy amin'ny teny anglisy fotsiny, dia ho lafo kokoa amin'ny 2 baht farafaharatsiny. Ny fitsidihana no fomba tsotra indrindra hahafahanao mifankafantatra amin'i Ayutthaya ho an'ny mpizahatany tsy manana traikefa na misy fotoana voafetra. Ny fividianana fitsangatsanganana dia azo atao any amin'ny masoivoho fitsangatsanganana na amin'ny torolàlana mivantana any amin'ny toerana fitsaharana.
Ny saram-pidirana fidirana amin'ireo ankamaroan'ny tempoly eo an-toerana dia 50 baht. Ny sasany amin'izy ireo dia navela ary maimaim-poana. Ny fe-potoana tsara indrindra hitsidika dia hariva sy maraina faingana: vitsy ny olona sy ny hafanana dia tsy mahery vaika.